DHAGEYSO: Guddoomiye Jawaari oo si la yaab leh uga hadlay Mooshinka laga Gudbiyey’ | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA DHAGEYSO: Guddoomiye Jawaari oo si la yaab leh uga hadlay Mooshinka ...
DHAGEYSO: Guddoomiye Jawaari oo si la yaab leh uga hadlay Mooshinka laga Gudbiyey’
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa ka hadlay Mooshinkii aroornimadii hore ee saakay ay ka gudbiyeen xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka.
Xildhibaanada Mooshinka gudbiyay oo saaka Warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho, ayaa sheegay tiradooda inay ka badan tahay 100 Xildhibaan, waxayna sheegeen inay Mooshin sharci ah ka gudbiyeen Gudoomiye (Jawaari).
Guddoomiye (Jawaari) oo galabta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay inuu codsanayo in xildhibaanada ay ilaaliyaan Golaha midnimada.
Wuxuu sheegay Guddoomiyaha Golaha Shacabka in Sabtida wixii ka dambeeya ay bilaabanayaan Howlaha Baarlamaanka, Mooshinkana uu sidaasi ku buray, isaga oo tilmaamay in arrintan ay aheyd Dimuqraadiyad.
“Waxaan codsanayaa in dhammaan xildhibaanada ay ilaaliyaan Golaha midnimada, Sabtida wixii ka dambeeya waxaa bilaaban doona Howlaheena caadiga ahaa, dhammaan waan idinkaga mahadcelinayaa bisdeelka siyaasadeed.”. Ayuu yiri Guddoomiye Jawaari.
MAHAAN KA DHAGEYSO CODKA JAWAARI